Monthly Magazine Home – Gold Channel Movies
1Season 1 Jun. 16, 2021
Episode 1 Jun. 16, 2021
Episode4Jun. 24, 2021
Episode5Jun. 30, 2021
Episode6Jul. 01, 2021
Episode7Jul. 07, 2021
Episode 8 Jul. 08, 2021
Episode9Jul. 14, 2021
Episode 10 Jul. 15, 2021
Episode 14 Jul. 29, 2021
Monthly Magazine Home( 월간 집)
လူတွေရဲ့ အိမ်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပုံခြင်းမတူကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း အများစုကတော့ နွေးထွေးတယ်၊ လုံခြုံမှုတွေပေးတယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားကြတာပါပဲ။
Na Young-Won (Jung So-Min) ဟာ အိမ်ခြံမြေလစဉ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အယ်ဒီတာ တစ်ယောက်ပါ။ အိမ်ကို နွေးထွေးတဲ့နေရာ၊ ရှင်သန်မှုပေးတဲ့နေရာလို့ သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ အိမ်ပိုင်မရှိပါဘူး။ အိမ်ဝယ်မယ့်အစား ပိုက်ဆံစုမယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိလည်း ရတယ်လို့တွေးတဲ့ ကောင်မလေးပါ။
Yoo Ja-Sung (Kim Ji-Suk) ကတော့ မဂ္ဂဇင်းတိုက်ရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး အိမ်ဆိုတာ နေဖို့ထက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ဝယ်သင့်တဲ့နေရာလို့တွေးတဲ့သူပါ။ သူရဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာ အိမ်အကြောင်းရေးရင် ငှားချင်စိတ်ထက် ဝယ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာစေတဲ့ Content မျိုးပါအောင်ရေးခိုင်းသူပါ။ အိမ်ပိုင်ဖို့က အဓိကဆိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပါ။
အလုပ်ရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းတို့ဟာ တစ်နေ့မှာတော့ အိမ်ရှင်နဲ့ အိမ်ငှားအဖြစ်တွေ့ဆုံမိပါတော့တယ်။ အိမ်တစ်လုံးအပေါ်ထားရှိတဲ့ခံယူချက်ချင်း မတူတဲ့သူနှစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ ရှေ့ဆက်ကြမလဲ။ အချင်းချင်းရဲ့ ခံယူချက်တွေပြောင်းလဲသွားမလားဆိုတာကို ရိုမန့်ဆန်ဆန်လေး ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးကို Gold Channel မှာ အပတ်စဉ် စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်။
Translated by Anthena,Faith,Phyo and Yin Cho
FinlaySeptember 5, 2021Reply
I think that is one of scoliosis surgery the most vital info for me.
JoleneSeptember 4, 2021Reply
Check out my web site … asmr it
AntonSeptember 2, 2021Reply
Wow! Finally I gotablog from where I be capable of truly obtain valuable information concerning my study and knowledge.
Check out my web blog: asmr off
SibylAugust 30, 2021Reply
Look at my website; of quest bars (t.co)
ElisabethAugust 28, 2021Reply
I just like the helpful info you supply to your articles. I will bookmark your blog and take
a look at again here regularly. I’m somewhat
My web page; web hosting where
LeoJuly 7, 2021Reply
A NyoJuly 7, 2021Reply